မိတ်ဆုံပွဲ | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
စာပေဟောပြောပွဲ အကြောင်း ပြန်ပြောပြပါဦး..
အစ်မ လာလည်သွားတာ ကျေးဇူးပါ
အမြဲ လာဖတ်ဖြစ်တဲ့ ဘလော့လေးပါ အစ်မ။။
ံHaveasafe trip ama
ခွင့်စေ့လို့ပြန်လာရင်သာ..စာပေဟောပြောပွဲအကြာင်း၊ ခရီးအကြောင်းလေးတွေ ဝေမျှပါ..
Haveanice trip and wait your return.
ပြန်လာရင် အတိုးချပြီးတော့သာ စာရေးပေးပါနော်..း)
ကိစ္စမရှိဘူး ၇ရက်လောက်ဆိုရင် အကြွေးဆက်ရင် ပြီးတာပဲ။ :)
ခွင့်တင်တဲ့ အစ်မတွေ များနေတယ်..:P
အေးဗျာ ...ဒီပို့(စ်)ဖတ်ရပြီး ရွပိုးထိုးသွားတယ်၊ ကိုဇာနည်ဝင်း ပြောလို့ သိပြီးပေမဲ့၊ အိမ်ခြင်းကပ်ရက် အလုပ်မအားလို့ ဝေးရလေခြင်း၊ နောင်နှစ်ပေါ့
ပြန်လာရင် ဓါတ်ပုံတွေ ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့မိတ်ဆုံပွဲရော၊ စာပေဟောပြောပွဲရော အတွေ့ အကြုံတွေ ပြန်ရေးနော်။ မျှော်နေမယ် ။ ခရီးသွားရင် မတည့်တာတွေလည်း စားမလာပါနဲ့ နော်။
ကောင်းတာပေါ့လေ။ ရင်ဘတ် မိတ်ဆွေ တွေ ရှိတယ် ဆိုတာ ဝမ်းသာ စရာပါ။ တို့ မှာ ဆိုရင် သနားစရာ အိမ် က တယ် လီဖုံး ဆိုတာ မြည်ရင် ကိုင် လိုက် ။ သေချာ ပါတယ်.နံပါတ်မှားဆက် ကြတာပါ။
စာပေဟောပြောပွဲကိုလဲ ခါးပတ်ကြီး ပတ်မသွားပါနဲ့ ဦး...။
ခွင့်အစား..ပို့ စ်အသစ်နဲ့ အကြွေးဆပ်ရမှာနော်..။
ပြန်လာရင် ထောက်လှမ်းလာတဲ့ အမှုတွေလဲ
သြ လတ်စတတ်တော့ တွားပြီပေါ့လေ ... ဟုတ်လား။
ပြန်လာလို့ ရေးစရာစာတွေ.. တင်စရာဓာတ်ပုံတွေ ပါမလာရင်တော့ "ချိုသင်းလာခဲ့...တုတ်ကောက်ခဲ့"
ဘယ်သူတွေနဲ့ တွေ့ဦးမယ်ဆိုတာလဲ သိတယ်ဟေ့..
ဒီကအမမှာတော့ ချမ်းလွန်း ပျင်းလွန်းလို့ ..
အလွမ်းတွေကြားထဲ မျော့ နေပြီ..
ချိုသင်းရဲ့ အမနှစ်ယောက်လုံးကို မြင်ဖူးထားတော့ ချိုသင်းပြောလိုက်တာနဲ့မျက်စိထဲမြင်တယ်…
ကိုမောင်ရစ်နဲ့မမေသန်းဌေးတို့စုံတွဲကတော့ လိုက်ဖက်ညီလွန်းလို့ဟိုးတုန်းကတည်းက လိုက်လိုက်ငေးရတာ… မမေသန်းဌေးကို ကြည့်ရတာ အရမ်းငြိမ်းချမ်းတဲ့ရုပ်လေးမို့သိပ်ချစ်တာ…
ချိုသင်းက အမတွေနဘေးမှာဆိုတော့ ပျော်စရာပေါ့…
စာပေဟောပြောပွဲဆိုတာနဲ့သွားရည်ယိုတယ်… နားထောင်ချင်လိုက်တာ… ဟောမယ့်သူတွေကလဲ ရှယ်တွေချည်းပဲ… မြန်မာတွေ အများကြီး ဆုံရမှာဆိုတော့ ပျော်စရာကြီးနော်…
သူများတွေ ပူဆာသလို ပူဆာမယ်… အကုန်ပြန်ပြောပြရမှာနော်…
မလွင်မာဆိုတာကိုတော့ တွေ့ဖူးပါတယ်။ အမတယောက်မိတ်ဆက်ပေးးတာ.။
ဟိုအစ်မကြီးနဲ့ အပေါင်းအပါတွေ တကယ်လာတော့မယ်တဲ့။
8 Nov 08, 01:47 AM
kom: တို့အတွက် နဲ့ ဝေးရာ သွားမငိုနေ နဲ့ဦး။
kom: မိုးချိူသင်း တို့ သွားတဲ့ ဆီ စိတ်နဲ့ လိုက်ခဲ့မယ်။ အမေရိကားကြီးတော့ ရောက် ရချည်သေး။ တို့အတွက် နဲ့ ဝေး
Very glad for ur trip.
And very funny to read ur post and comments.
I have been seen Ama May Than Htay at the monestry. She is so sweet and cute. I love her.
I got ur blog add from Ko Htein Linn (KNA). I m one of sisters of sayar KO Naing Gyi. Last day we talked about ur good posts. He is very happy to hear about u.
Instead of ur trip, I m very happy.
I'm SSF, i got invitation letter from friends, but i can not attend because of On Sat, i will visit Taung Pu Lu monestry.
Pls don't eat too much whatever foods u see.
I think now your are riding in the car driven by Kyaw Wunna on the way to San Francisco, while I was working, my co-worker needs to know about my former office at University of Rangoon, I Google it, just click onaRASU blog by Sit Mon, I don't know who she/he is, but she/he wrote ""Once uponatime in Burma there wasaUniversity know as RASU"" , that was so blue... hummm.., then, unexpectedly or unfortunately found your blog in it. First day of your blog, that was my last visit, it shown just only one or two articles. Are you so free? Don't take care of your health well..?
I gonna to tell your fan that you always enjoy unhealthy food at home, and fed others including me. May be you will have some at the community center.
Take care kiddo. We want you to be healthy.
Well.. see you.
ဝေးး.. ပျော်စရာကြီး... သူငယ်ချင်းအမတွေနဲ့တွေ့ပြီး ပျော်နေမယ့် အမကို မြင်ယောင်မိတယ်.. ပြန်လာရင် အမရဲ့ အတွေ့အကြုံအသစ်တွေကို တင်ပေးနော်.. စောင့်နေမယ်.. :)
အမ မုန့်ချိုသင်း မုန့်စားချင်တယ်
ဟီး ဟီး လွမ်းလို့လာအော်တာပါ
ကိုယ်ပိုင် blog လေး.လုပ်ထားလို့..
အိန္ဒြာ( Happy Cloud)
kom: MCT: သူကဦးသွားတယ်။ အစ်မကြေ့ပာမလို့
ကားမောင်းသင်တဲ့ဆရာကို ဂျပန်ဖြစ်အောင် လုပ်နည်း အခုတော့ သိလိုက်ရပါပြီ။ ကျွန်တော်ကတော့ လိုင်စင်ဖြေတဲ့အချိန်မှာ မီးပွိုင့်ရောက်ရင် လိုင်စင်စစ်တဲ့ဆရာ ဂျပန်ဖြစ်တော့တာပါပဲ။
ကျနော် ကျော်ကျော်ပါ၊ ဟောပြောပွဲမှာ ဆုံတယ်လေ။
အဲလ်အေကို ပြန်ရောက်ရင် မိုင်မြစ်ကြီးနား ဘလော့ဂ်ကိုလည်း လှည့်ခဲ့ပါအုံး။ မိုးချိုရဲ့ ဘလော့ဂ်ကို လင့်ထားလိုက်တယ်။
ပြန်လာရင် ကုန်ကြမ်းတွေ တပွေ့တပိုက်နဲ့ ပြန်လာမှာ သိနေတယ်။ လမ်းခရီးမှာ အဆင်ပြေချောမွေ့ပါစေ အမ...။
တစ်ချိန်မှာ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ဖြစ်လာမယ် ထင်ပါတယ်။